Ranesa Firiana : “Miankina amin’ny fitantanana sy ny asa vita ny fahamarinan-toerana” | NewsMada
Mby aiza ny fahamarinan-toerana politika? Maneho ny fijeriny ny mpahay lalàna, Ranesa Firiana: “Tsy miankina velively amin’ny rafitra ny fahamarinan-toerana politika, fa ny fankasitrahan’ny vahoaka sy ny maro anisa ny fomba enti-mitantana sy ny asa vita ary ny vina hotanterahina.” Dinidinika…
Gazety Taratra (*): Marina ve ny hoe tsy ara-dalàna ny fomba nifidianana ireo mpikamban’ny birao maharitry ny Antenimierandoholona tamin’ny voalohany?
Ranesa Firiana (-): Malalaka amin’ny fandaminana anatiny ny Antenimiera tsirairay. Noho izany, tsy azo terena hanaraka ny fitsipika anatiny nampiasain’ny teo aloha ny Antenimiera vaovao. Misy lalàna mamaritra ny Antenimiera tsirairay avy. Ary raha tsy misy ny lalàna, ny fomba amam-panao anaty Antenimiera no arahina.
Tsy voahaja ny maha Antenimiera ny Antenimierandoholona nandritra ny fifidianana ireo mpikambana anaty birao maharitra. Satria tsy nanontaniana ny heviny ireo loholona vaovao amin’ny fomba enti-mandrafitra sy mifidy ny birao maharitra. Noho izany, tsy ara-dalàna ny fomba nenti-nifidy ny filoha sy ny birao maharitry ny Antenimierandoholona.
Alohan’ny nanatanterahina ny fifidianana, tokony ho nolanin’ireo loholona vaovao ny fomba enti-mandrafitra ny birao maharitra sy ny firafitr’izany. Raha tsy natao izany, tokony ho nolanin’izy ireo aloha fa izay voalazan’ny fitsipika anatiny teo aloha no hampiharina.
* Nitondra fanovana lehibe eo amin’ny firafitry ny birao maharitra ny fitsipika anatiny vaovao lany teo anivon’ny Antenimierandoholona. Inona izany no mety hitranga?
– Izay fitsipika anatiny nankatoavin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana no tsy maintsy ampiharin’izy ireo mandritra ny fotoam-piasany. Noho izany, raha ambara famifanaraka amin’ny lalàmpanorenana ilay firafitra vaovao: afa-mijanona amin’ny toerany ny filoha, ny kestora ary ny mpampaka-teny. Ireo filoha lefitra kosa, tsy maintsy mandao ny toerany raha tsy misy fepetra manokana momba azy ireo ao anatin’ilay fitsipika anatiny vaovao.
Raha toa ka niova kosa ny fomba enti-mifidy ireo mpikamban’ny birao maharitra, fa tsy mitovy amin’izay nampiharina nandritra ny fifidianana efa natao: tokony haverina tanteraka ny fifidianana ireo mpikambana rehetra anaty birao maharitra.
Raha tsy mazava ireo fepetra samihafa ao amin’ilay fitsipika anatiny ary raha toa ka misy ny fandikana vilana izay voalazan’ny lalàna, mety hiverina ny tranga toy ny teny amin’ny Antenimierampirenena.
* Ahoana ny hevitrao momba ny hoe filoha lefitra iray avy amin’ny mpanohitra eo anivon’ny Antenimierandoholona?
– Tsy manery ny loholona hanome toerana manokana ho an’ny mpanohitra ny lalàna velona eto amintsika. Nefa tsara ny safidy nataon’ireo loholona, satria azo itarafana izany fa tena te handala ny fenitra demokratika sy repoblikanina ny maro anisa amin’izy ireo.
Tsy mitovy sata amin’ny mpanohitra eny anivon’ny Antenimierampirenena anefa izy io, satria tokony ho fanoherana anatiny no hisy eo anivon’ny Antenimierandoholona. Noho izany, tokony ho loholona avy amin’ny antoko na vondron’antoko politika tsy mitovy firehan-kevitra amin’ny Hery vaovao ho an’i Madagasikara (HVM) no hitana io andraikitra io. Tsy misy itsabahan’ny hery avy aty ivelany, indrindra ny fahefana mpanatanteraka, ny fanapahan-kevitra momba izany.
* Mitombina ve ny hoe hampisy fahamarinan-toerana politika ny fijoroan’ny Antenimierandoholona, nefa ny Antenimierampirenena ihany no afa-manongana ny filoham-pirenena na manao fitsipaham-pitokisana ny governemanta?
– Tsy miankina velively amin’ny rafitra misy ny fahamarinan-toerana politika. Ny fankasitrahan’ny vahoaka sy ny maro anisa ny fomba enti-mitantana sy ny asa vita ary ny vina hotanterahina no hahatongavan’izany.
* Ahoana ny fomba fifidianana filankevi-paritra sy lehiben’ny faritra amin’ny maha vondrombahoaka itsinjaram-pahefana ny faritra: andraisan’ny daholohe anjara sa ny mpifidy vaventy ihany?
– Mamaritra ny lalàna manankery amin’izao fotoana izao fa ireo mpifidy vaventy ihany no mifidy ireo lehiben’ny faritra sy ireo mpanolotsaim-paritra. Roa isaky ny distrika no fidina, ary efa-taona ny fe-potoam-piasan’izy ireo. Nefa azon’ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona atao ny manova io lalàna io, raha heverin’izy ireo fa tsara kokoa ny handraisan’ny vahoaka rehetra anjara amin’izany fifidianana izany.
* Ahoana ny fahitanao ny hoe tany tan-dalàna amin’izao fotoana izao?
– Mbola mila ezaka goavana avy amin’ny mpitondra sy ny vahoaka ary ny mpampihatra lalàna rehetra vao afa-milaza isika fa tafapetraka eto Madagasikara izany fanjakana tan-dalàna izany. Maro ny mihevitra fa mbola manjaka eto amintsika ny kely tsy mba mamindro sy ny fanjakan’ny matanjaka. Maro ny milaza fa natao ho an’ny madinika ny lalàna, na lazaina aza fa tokony ho eo ambanin’ny lalàna avokoa ny tsirairay.